बिहे को सिजन चलिरहेका बेला आज शुक्रबार पत्याउनै नसकीने गरि यस्तो भयो सुनको भाउ ! – Enepali Samchar
बिहे को सिजन चलिरहेका बेला आज शुक्रबार पत्याउनै नसकीने गरि यस्तो भयो सुनको भाउ !
December 11, 2020 adminLeaveaComment on बिहे को सिजन चलिरहेका बेला आज शुक्रबार पत्याउनै नसकीने गरि यस्तो भयो सुनको भाउ !
E NEPALISAMCHAR मंसिर २६ काठमाडौँ । शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मुल्य स्थिर रहदै प्रतितोला ९२ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि विहिबार पनि छापावाला सुन तोलाको ९२ हजार ५ सयमा नै कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै शुक्रबार तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ९२ हजार ५० नै कायम रहेको छ । त्यसैगरी शुक्रबार चाँदीको मुल्य पनि स्थिर रहेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १२ सयमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ब्रुमरले सङ्कलन गरेको धुलोबाट इँटा बनाउने तयारी गरेको छ । कामपाले झण्डै दुई वर्षदेखि सडकमा ब्रुमरको सहायताले धुलो सङ्कलन गरी सफा गर्ने काम गरिरहेको छ । हालसम्म करीब छ हजार ५०० टन धुलो जम्मा भइसकेको छ ।
यी लक्षण हुने व्यक्ति हुन्छन् निकै बुद्धिमान, तपाईमा पनि पर्नु भयो की ?
विदेश जान ठ्याकै कति खर्च लाग्छ ? यस्तो छ देशगत लागत विवरण